जाने होइन त भृकुटीमण्डपमा माछा खान ? « Sansar News
जाने होइन त भृकुटीमण्डपमा माछा खान ?
२३ कार्तिक २०७३, मंगलवार १३:०१
२३ कात्तिक, काठमाडौँ । मङसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म तेस्रो राष्ट्रिय मत्स्य महोत्सव तथा परिकार प्रतियोगिता काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा ‘स्वदेशी माछा खाआँैं, स्वस्थ्य रहाँैं’ अभियानकासाथ उक्त महोत्सवको आयोजना हुन गइरहेको छ ।
आव २०७२÷७३ असार मसान्तसम्म ९ हजार ९३४ हेक्टर जलाशयमा व्यावसायिक माछा उत्पादन भएको छ । माछा उत्पादन कार्यका लागि ३५ हजार किसान आवद्ध भएको बताइन्छ ।